Shariif Xassan oo loo diiday inuu u socdaalo Baydhabo | KEYDMEDIA ENGLISH
Shariif Xassan oo loo diiday inuu u socdaalo Baydhabo
Musharrax Madaxweye, Shariif Xassan Sheekh Aadan, ayaa saaka loo diiday inuu aado magaalada Baydhabo, is uu ugu tartamo doorashada kursiga HOP#261, oo la filayo in dhawaan doorashadiisu dhacdo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Shariif Xassan Sheekh Aadan, ayaa saakay laga hor istaagay in uu u socdaalo magaalada Baydhabo ee xatunka gobolka Bay, xilli uu raadinayo kursi ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS.
Xogaha aan ka heleyno garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in Shariif Xassan, daqiiqadihii ugu danbeeyay ee uu bixi lahaa lagu wargaliyay in diyaaraddu aysan qaadi karin, sababo la xariira amarro amni oo gobol iyo federaalba leh.
Madaxtooyada Soomaaliya, iyo Madaxweynaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Lafatagareen, ayaa diiddan in Shariif Sakiin, u tartamo, kursiga HOP#261, kaas oo baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay wiilkiisa, C/qaadir Shariif Xasan, oo xilka aabihiis ka beddelay 2014-kii.
Wax yar kadib xayiraadda Guddoomiyihii hore ee baarlamanka Soomaaliya, waxaa soo baxday amar ka yimid, Wasaaradda Amniga, waxaana la amray in la fasaxo Shariif Xassan, loona oggollado todobo qori oo AK47 ah iyo Todobo Bastooladood oo ilaaladiisu wataan.
Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo ayaa ka cabsi qabta, in haddii Shariif Sakiin, soo helo, HOP#261, uu noqon karo Guddoomiyaha Golaha Shacabka, taas oo ay u arkaan caqabad weyn, waxayna dadaal ku bixinayaan in kursiga loo xiro shaqsi kale.
Waxaa xusid mudan in Musharrax Madaxweyne, Shariif Xasan uu 2016-kii kursi Xildhibaan soo siiyay Laftagareen, kaas oo u suura-galiyay inuu ugu danbeyn kala wareego kursigii uu ku fadhiyay ee Madaxweynaha KGS, haddana doonaya inuu dhaafiyo HOP#261.
Xuseen Sheekh Maxamuud, oo ka mid ah xubnihii ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee hadda uu tartanka ka hor istaagay Laftagareen, ayaa la-yaab ku tilmaamay, abaal-kadaca MW koofur galbeed, uu kula dhaqmayo Madaxweynihii ka horreeyay Shariif Xasan.
Adiga oo shacab ah, Madaxweynihii ku soo dhoweeyey, xildhibaana kaa soo dhigay, maanta adigoo madaxweyne ah inaad u diido inuu yimaado magaaladii uu madaxweynaha ka ahaa, ceeb iyo gunnimo ka weyn ma jirto. Ayuu Xuseen Sheekh.
Guddoomiye ku xigeynkii hore ee Aqalka hoose, C/Wali Muudeey, ayaa hore looga hor istaagay inuu u socdaalo Baraawe, si uu ugu tartamo kursi baarlamaan, halka, Guddoomiye ku xigeynka amniga iyo siyaasadda Cali Yare, loo diiday inuu aado Dhuusamareeb.
Inta badan kuraasta Barlamaan ee taalla Koofur galbeed, waxaa loo xiray shaqsiyaad ay Madaxtooyada Soomaaliya gadaal ka taagan tahay, kuwaas oo u badan dhallinyaro, siyaasadda ku cusub oo aan hore wax xilal ah u qaban.
Doorashada Aqalka hoose ayaa gabogabo ku dhow, halka ay kaliya sagaal maalmood ka harsan yihiin waqtigii loo qabtay in la soo af-meero doorashada baarlamaanka, kurasta Gobollada Waqooyi iyo beelaha Banaadiriga ayaa hore loo soo gabagabeeyay.